smartwatch kacha mma, ị ma nke ọ bụ? Batara! Emelitere Mee 2022 | Androidsis
Smartwatches kacha mma
E nwere oge mgbe akụkụ ọhụụ nke ngwa eji ejiji yiri ka ọ gaghị apụta ma ọ bụ kwenye ọha mmadụ. N'ezie, ọtụtụ ndị ọrụ, gụnyere mụ onwe m, ekwuola n'oge ụfọdụ na "elele anya anaghị eme ihe ọbụla ma ọ bụghị ikwugharị ihe ekwentị na-eme." O sina dị, smartwatches agbanweela otutu kemgbe ndị mbụ ụdị, na agbanyeghị na ọ ga-abụrịrị ahịa pere mpe nke kacha mma China smartwatch Ọ bụ nke na-ere ahịa kachasị, ọ dị oke na olu na ego sitere na ngalaba ama ma ọ bụ mbadamba, eziokwu bụ na ọ naghị akwụsị itolite.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na anyị nọ na Androidsis, anyị enweghị ike ịgọnahụ nke ahụ ọbịbịa nke Apple Watch bụ isi ihe gbanwere. Kemgbe ahụ, ahịa smartwatch etolitewo nwayọ, na nke ụfọdụ n'ihi nnukwu mmasị ụlọ ọrụ na-enye ndị ọzọ maka ndị ahịa, na nke ọzọ n'ihi nnukwu mmasị nke ndị na-azụ ahịa n'onwe ya n'ịchọta ụzọ ọzọ na apụl. Ọ bụrụ na ị na-echekwa ị nweta smartwatch mbụ gị mana ị mabeghị mkpebi, taa anyị na-agwa gị ka ịhọrọ ya ụfọdụ n'ime smartwatches kachasị mma nke oge a. Echefula ya n'ihi na ị ka ga-ahụ nke kachasị mma maka gị.
1 Smartwatches kacha mma na ahịa
1.2 Samsung Gear S3 Classic na Samsung Gear S3 Frontier
1.3 Huawei Watch 2 na Watch 2 Omuma
1.5 Motorola Moto 360 nke abụọ Gen (2)
1.6 LG Watch Urbane 2 abụọ Gen
2 Zụta smartwatch: ụfọdụ ndụmọdụ bara uru
Smartwatches kacha mma na ahịa
Na-ebughi n'ihu, ka anyị malite ịtụle ụfọdụ ihe nwere ike ịbụ kacha mma smartwatches ma ọ bụ smart ese na ị nwere ike ịchọta n'ahịa taa. O doro anya na enwere ọtụtụ ụdị na ụdị dị iche iche karịa ka anyị ga-ahụ ebe a, mana anyị anwaala ịhọrọ ndị ahụ enye mma, arụmọrụ, imewe ka mma, wdg, na-enweghị ilebara anya na ọnụahịa ya. N'aka nke ọzọ, echefula na ebe a ka anyị na-ekwu maka smartwatches, smartbands ma ọ bụ quantifying ọla aka bụ akụkọ ọzọ, ọ bụ ezie na ha bụkwa ngwaọrụ ndị nwere ike ịrụ ọrụ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ Androidsis, taa anyị na-ekwu maka elele anya smart, anyị enweghị ike ịgọnahụ ihe akaebe na Apple Watch Series 2 bụ otu n'ime smartwatches kachasị mma na ahịa dị ugbu a
Have nwere ya dị na abụọ, 38mm na 42mm, na ọtụtụ ụdị eriri. Ihe kachasị pụta ìhè bụ Onyinye Digital ma ọ bụ okpueze dijitalụ, na interface njirimara ụdị apụl na watchOS dị ka sistemụ nrụọrụ.
Gị isi ike ha dị abụọ. N'otu aka, ihe nnwere onwe na, ọ bụ ezie na ọ kawanye mma ma e jiri ya tụnyere mbipute gara aga, eziokwu bụ na ọ ga-efu gị iru ụbọchị ojiji, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eji ya ọtụtụ. Site n'ebe ọzọ, naanị dakọtara na iPhone, ma ọ bụrụ na ị na-eji gam akporo ma ọ dịghị ezube ịgbanwe, ị nwere ike ichefu ya.
El Apple Watch Series 2 O nwekwara accelerometer, gyroscope, ihe mmetụta obi obi, ihe mmetụta ọkụ ọkụ, 8 GB nke nchekwa dị n'ime, batrị 273 mAh, 512 GB nke RAM, GPS, Bluetooth 4.0, iguzogide mmiri na ájá, wdg.
Samsung Gear S3 Classic na Samsung Gear S3 Frontier
Anyị na-awụlikwa elu na nnukwu ndorodoro nke Apple, Samsung, na anyị na-eme ya ugboro abụọ ya abụọ kasị ama smartwatches, na Gear S3 Omuma na Gear S3 N'ihu.
Samsung Gear S3 Omuma nke Samsung gosiputara a kpochapụwo ma mara mma na ihuenyo 1,3-anụ ọhịa, batrị 380 mAh, nchekwa 4 GB, 0,75 GB Ram, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2, gyroscope, accelerometer, barometer, ihe mmetụta ọkụ ọkụ gburugburu ebe obibi, ngwangwa ihe mmetụta obi, nchedo megide uzuzu na mmiri. .. Dị ka sistemụ arụmọrụ ọ na-agba Tizen, nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara n'onwe ya, ma nwee gam akporo na ekwentị gam akporo.
N'ihu ya, Samsung Gear S3 Frontier na-enye a ihe siri ike na egwuregwu na uzọ ọzọ, o yiri ụdị Omuma, belụsọ nke ahụ nwere njikọ LTE, nke na-eme ka ọ bụrụ na ọ nweghị onwe ya na smartphone, na-adị mma maka njem na ọrụ ndị dị n'èzí.
Huawei Watch 2 na Watch 2 Omuma
Ndị kasị ibu ama emeputa ke China nwekwara otu nke kasị mma smartwatches na ahịa, ọ bụ Huawei Watch 2, igwe elekere nke na-abia na nsụgharị abụọ nke, dị ka ụdị Samsung's Gear S3, dị iche na ibe ha site na ọnụnọ ma ọ bụ enweghị njikọ LTE, yana site na imewe na eriri kemgbe Huawei Watch 2 Classic Ọ na-abịa na akpụkpọ anụ. eriri mgbe Huawei Watch 2 na-enye ya na eriri plastik.
Ha abụọ nwere n'ichepụta seramiiki, Asambodo IP68 iguzogide mmiri na ájá na iwekota a 1,2-anụ ọhịa ihuenyo mgbe n'ime anyị na-achọta njikwa Ibe Snapdragon 2100 Quad-isi Cortex-A7 800 MHz, tinyere 750 MB nke RAM, 4 GB nchekwa na a 420 mAh batrị nke ụlọ ọrụ ahụ kwere nkwa ruo awa 7 iji GPS rụọ ọrụ.
Olee otú sistemụ na-agba ọsọ 2.0 Weebụ Weebụ na ọ na-integrates GPS, NFC, Bluetooth 4.1 na-ahụkarị ihe mmetụta na anyị na-ahụ na ndị ọzọ ese. Ewoo! Na ọ bụ dakọtara na ma iPhone na gam akporo ọnụ.
Ọzọ nke kachasị mma smartwatches nke oge a bụ nke a Asus ZenWatch 3 eji ihe eji eme ihe site na igwe igwe na igwe onodu 1,39 nke Corning Gorilla Glass kpuchitere.
N'ime, Asus ZenWatch 3 biara na nhazi ya Ibe Snapdragon 2100 tinyere 512 MB RAM na 4 GB nke nchekwa dị n'ime yana a 340 mAh batrị con usoro ngwa ngwa (ruru 60% na naanị 15 nkeji) na Energy ịzọpụta usoro.
Ọ nwere atọ anụ ahụ bọtịnụ, nke na-enye ya a nnọọ kpochapụwo anya, na bụ dakọtara na iOS na gam akporo. Ọzọkwa nwere Asambodo IP67 mmiri na uzuzu eguzogide, Bluetooth 4.1, obi ọnụego ihe mmetụta, accelerometer na ndị ọzọ.
Motorola Moto 360 nke abụọ Gen (2)
Obi sie gị ike na echefubeghị m. Otu n'ime smartwatches enwere ekele kachasị na-aga n'ihu ịbụ Moto 360 2nd Jen Motorola, ma malite ya na 2015. N'ezie, ọ dịla Gam akporo Wear kacha ewu ewu wearable ngwaọrụ ma na-enye nlezianya anya ma nụchaa nke ọma karịa ọgbọ mbụ ya.
N'etiti nkọwapụta ọrụ aka ya, anyị nwere ike ịkọwapụta na ọ na - ejikọ ihe nhazi Snapdragon 400 na 512 MB nke RAM na 4 GB nke nchekwa n'ime, 1,56 inch inch, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, ihe mmetụta ọnụọgụ obi, accelerometer, 320 mAh batrị y dakọtara na gam akporo na iOS.
LG Watch Urbane 2 abụọ Gen
Site na South Korea biara nke a LG Watch Urbane 2 Ọgbọ nke abụọ, otu n'ime smartwatches nwere nnwere onwe ka mma na nke imewe n’otu oge kpochapụwo na nke oge a, ma dịkwa ike. Mere nke igwe anaghị agba nchara, o nwere ihuenyo 1,38-inch, a 570 mAh batrị, IP67 na-eguzogide mmiri, Qualcomm Snapdragon 400 processor, 768 MB Ram, 4 GB nke nchekwa na njikọ LTE.
Ruo ugbu a, nchịkọta nke smartwatches kachasị mma dị taa. Anyị ji n'aka na ọtụtụ n'ime gị ga-atụ uche ụfọdụ ụdị na ụdị ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, Watch Style na Watch Sport nche nke LG rụpụtara maka Google na nke bụ ndị mbụ jikọtara gam akporo Wear 2.0 agbanyeghị, nyere obere nnweta ha pere mpe. nke ahịa, A masịrị m ịghara ịgụnye ha.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị jiri smartchiche ọzọ ị chere dị mma karịa nke ọ bụla n'ime ndị a, ma ọ bụ nwee aro ndị ọzọ, echefula iji ngalaba nkọwa na ala.
Zụta smartwatch: ụfọdụ ndụmọdụ bara uru
Ka ọ dị ugbu a, enwere ụzọ ojiji abụọ maka elele anya: iji bụrụ onye mgbakwunye maka ọkwa, nzaghachi ngwa ngwa na ajụjụ ndị ọzọ yana, ọkachasị, na-eme ihe mmega ahụ (usoro ndị e mere, njem dị anya, usoro ụra, calorie ọkụ, ọnụọgụ obi, wdg).
Ndụmọdụ m bụ na ọ bụrụ na ị bụghị onye na-egwu egwuregwu ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, ị tụgharịrị ka ị gbanwee ụzọ ndụ dị mma karịa nke mmega ahụ na-enweta ọkwá, ikekwe smartwatch abụghị maka gị. Ọ bụrụ n’ịche maka ọkwa, ị nwere ike mejue afọ site na njiko na nkwonkwo aka gị, gbakwunye ị ga-egbochi ha ka elekere gị wee dịkarịa ala ụbọchị niile. Na nke a, anyị na-aga n'ihu na isi ihe ọzọ dị mkpa.
N'aka nke ọzọ, chee na smartwatches dị Ezubere maka nnweta ngwa ngwa na obere, ya mere ndụ batrị dị oke. N’ezie, ụfọdụ ga-anọ ogologo oge karịa ndị ọzọ mana n’agbanyeghi, atụla anya ihe karịrị otu ụbọchị na ọkara iji “nkịtị” eme ihe, belụsọ na ị jiri ya obere, mana ọ bụrụ na ị ga-eji ya ntakịrị, gịnị kpatara gị aga ịzụta ya?
Na mgbakwunye na ọrụ ya na nnwere onwe ya, akụkụ ọzọ nke ị na-ekwesịghị ichefu bụ ya ike na anwụ ngwa ngwa. Ọbụlagodi na ị naghị eme egwuregwu dị egwu, elekere ahụ dị na nkwojiaka, nke a bụ ebe dị mfe esemokwu na obere ọkpọ, yabụ, gbaa mbọ hụ na ngwaọrụ ị nwetara bụ ihe nrụgide dịka o kwere mee, ọkachasị ngebichi ya.
N'ikpeazụ, anyị nwere ihe kpatara ya ndakọrịta. Ọ bụrụ na ịgaghị agbanwe ama gị ma ọ bụ, ọ dịkarịa ala sistemụ arụmọrụ, gbaa mbọ hụ na smartwatch ị họọrọ dabara adaba. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwepụ gam akporo, ị gaghị enwe nsogbu n'ihi na ọ dakọtara na iOS na gam akporo ọ bụla, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Apple Watch, ị ga-enwetakwa iPhone n'ihi na dị na mbụ na Cupertino, usoro okike ya na-emechi ọnụ , ewezuga obere obere, yabụ chee echiche banyere ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Smartwatches kacha mma
Naanị site na ikwe ka gam akporo na iOS, agaara m etinye ihe ọ bụla smartwatch na android wear ma ọ bụ tizen. Elekere Apple nwere nnukwu nkwarụ naanị n'ihi oke mmachi a.
Zaghachi na thyranus
Anọ m na Sony Smartwatch 3
Peeble na-efu. Enweghị nsogbu batrị, ruo ụbọchị 10. Na-eguzogide ma dị ọnụ ala.
A naghị ere samsung gear s3 frontier lte 4g na Spain. Naanị ụdị Bluetooth ka a na-ere ahịa.
Ma Huawei smartwatch 2 na 4G na-ere na Spain, ugbu a, enweghị m ya n'aka m na amaghị m ma ọ nwere ike ịhazi ya, mana anyị na-aga maka ọkwa na ka batrị ahụ wee nwee ike ijide ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ ahazi dị ka gprs ọ ga-abụ mmiri ara ehi n'ihi na ọ ga-abawanye oge nke batrị ahụ ma tinyela maapụ nke map google ma budata ya na smartwatch na batrị kwesịrị ịdị ogologo oge, enwere m ike ịgba akaebe na 3G na 4G na-eri a ọtụtụ batrị karịsịa ma ọ bụrụ na mkpuchi ahụ agbadata.
Ihe ịgbada site na 4G gaa na grps karịrị ihe ọ bụla iji bulie nnwere onwe nke batrị ahụ, n'ihi na ịnata oku na ọkwa ọ karịrị ezu na anyị na-ahazi ihe niile nke ọma, ị nwere ikike ịhapụ ịhapụ, ọbụlagodi ozi ịntanetị site na ịhazi na ọ na - ewedata nkụnye ndị eji isi mee. (Agbanyeghị na agaghị m etinye email na smartwatch maka naanị n'eziokwu na mgbe ezigara email, azaghị azịza ozugbo ma ọ bụ nzaghachi n'ụbọchị ma ọ bụ opekata mpe m tụlee ya n'ụzọ ahụ ma ọ bụ ihe m na-ahụ kwa ụbọchị Ndabere na ọrụ, ọ bụrụ na ha na-eme ọsọ ọsọ, ha na-ezitere gị email ahụ n'ihi na ọ ka mma ide ederede, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha tinye faịlụ ma mesịa zitere gị ozi ozugbo iji gosi na ha ezitere gị email ahụ ka ị nwee ike lee ya anya.
Android 8.0 na-abịa Google Pixel na Nexus na August 21